पर्यटन उद्योग “धुंवा रहित उद्योग’ : halkhabar.com.np
पर्यटन प्रबर्द्धनका लागी राज्यले आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन ।
उनिहरुले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र पूर्वाधार बिकासलाई तिब्र पार्नु पार्ने आवश्यकता औल्याएका छन । पुर्वाधार निर्माणका काममा ढिलाई हुंदा पर्यटन व्यवसायमा असर पुगेको उनिहरुको ठहर छ ।
पर्यटकिय क्षेत्रहरुको पहिचान एवं प्रबर्द्धन गर्दै एकिकृत योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड थियो । तिलोत्तमा व्यापार संघले सोमबार आयोजना गरेको पर्यटन प्रबर्द्धन सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यस क्षेत्रका सबै पर्यटकिय स्थलहरुको एकिकृत बिकासमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै संस्कृतिविद डा. गितु गिरीले यस क्षेत्रको पर्यटन प्रबर्द्धनका लागी बुद्धसंग सम्बन्धित स्थलहरुको बजारीकरणमा जोडदिनुपर्ने बताए । उनले लुम्बिनीलाई केन्द्र मानेर यस क्षेत्रलाई पर्यटकिय केन्द्रको रुपमा बिकास गर्न सकिने उल्लेख गरे । प्राध्यापक डा. खगराज शर्माले राम्रो अन्तराष्ट्रिय कुटनितिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सके मुलुकमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने बताए । उनले राजनितिक अवस्था, पूर्वाधार बिकास, सुरक्षा, वातावरण, सत्कार लगायतका बिषयले पनि यसमा प्रभाव पार्ने उल्लेख गरे । सहकारी विज्ञ समेत रहेका शर्माले नमुना सहकारीको माध्यमबाट पनि विदेशी पर्यटक आकषिर्त गर्न सकिने बिचार व्यक्त गरे । सहकारी क्षेत्रमा ६० लाख मानिस आबद्ध छन । २, ४ वटा नमुना सहकारी स्थापना गरौं, विदेशी पर्यटक त्यी हेर्न अध्ययन गर्न आउंछन, उनले भने ।’
अर्का प्राध्यापक डा. भोजराज कडेरियाले पर्यटन उद्योग धुंवा रहित उद्योग भएकाले यसको प्रबर्द्धनमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने औल्याए । उनले प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकेमात्रै पर्यटन उद्योगको बिकासले गति लिने बताए । कडेरियाले आन्तरिक पर्यटन प्रबर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष दधिराम खरेलले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुका लागी सुबिधायुक्त सवारी संचालनमा जाड दिइएको जानकारी दिए । उनले आवश्यकता अनुसार यसको संख्या बढाउन व्यवसायी तयार रहेको बताए । पर्यटन व्यवसायी समुन्द्र जि.सीले बाह्य पर्यटकहरुलाई अनिवार्य रुपमा रात बिताउने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले भारतिय भुमि हुंदै आउने तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरुलाई नेपालमा केहि दिन पनि रोक्न नसकिएको दुखेसो गरे ।
त्यसका लागी राज्यले अनिर्वाय रुपमा रात बिताउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । पर्यटन व्यवसायी सञ्जय बजमयले पर्ुवाधार निर्माण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो सम्पन्न होस भन्ने व्यवसायीको चाहाना रहेको उल्लेख गरे । तिलोत्तमा व्यापार मेला मुल आयोजक समितिका संयोजक झबिन्द्र कंडेलले पर्यटन क्षेत्रको प्रबर्द्धनमा हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए । कार्यक्रम व्यापार संघका महाचिव बिष्णु बरालको संचालन, अतिरिक्त क्रियाकलाप संयोजक शितल ज्ञवालीको स्वागतमा भएको थियो ।